Miidiyaa Naayijeeriyaa: Fuula oduu sobaa sakatta'u dandeessisu banatan - BBC News Afaan Oromoo
Miidiyaa Naayijeeriyaa: Fuula oduu sobaa sakatta'u dandeessisu banatan
Miidiyaaleen Naajeeriyaan tarkaanfii fuulawwan oduu sobaa tattamsaasan ittiin qolachuu dandeessu eebbisiifatte.
Tarkaanfiin kunis filannoo Pirezedaantummaa biyyattiin itti deemaa jirtu keessatti fuulli oduu sobaa kun dhiibbaa geessisuu malu dursitee itti qophaa'uuf akka ta'es himamaa jira.
WhatsApp fi miidiyaaleen hawwaasummaa biroon hedduu oduu sobaatiin kan guutamaniif nama burjaajessan ta'aniiru biyyattii keessatti.
Marsariitiin haaraa Naajeeriyaan ittiin oduu sobaa sakattaatu eebbisiifte kun CrossCheck Nigeria jedhama.
Waanti eebbifame kun gaazexeessitoota guutummaa biyyattii keessa hojjetan waliin ta'uudhaan oduuwwan sobaa, hamiiwwaniifi olola miidiyaalee hawwaasummaa irra tamsa'aa jiran qolachuudhaaf gargaara jedhameera.
Uummanni oduuwwan akka dhugaa ta'uun isaa mirkanaa'u/sakatta'amu barbaadan barbaadan heerumsawwan, suurawwan, viidiyoowwaniifi odeeffanoo biroo karaa WhatsApp ykn marsariitii CrossCheck Nigeria erguu ni danda'u.
Dhaabbanni oduu AFP pirojekticha keessatti hiramaate akka jedhutti qorannoon xumurame kan fuula kana irratti mul'atu yeroo warreen waliin hojjetan yoo xiqqaate shan ta'an mirkaneessan qofadha.
Baha Afriikaatti duulli oduu sobaa hambisuu eegalame
Daarekterri Ol-aanaa ICIR pirojektii kana akka to'atu taasifame Daayoo Ayeetaan, akka jedhetti Feesbuukiin, Twitter fi WhatsApp yeroo ammaa kana oduuwwan sobaa, namoota burjaajessuu, hamiiwwaniifi olola daddabarsuudhaan rakkoo warra siyaasaa ta'aniiru.
"Miidiyaaleen oduuwwan miidiyaalee hawwaasummaa irratti rabsaman dhugaa ta'uu isaanii mirkaneeffachuuf dirqamni isaanirra jira."
Oduu Sobaa: Ajjeefamuu lammiilee Somaalee hanga maq-balleessii pireezidaantotaatti
Oduu Sobaa: Miidiyaalee hawwaasummaarra tatamsa'een namoonni daboodhaan ajjeefamaa jiru